There wasaproblem loading image 2Q==. in mod_featcats
Web Admin	2019-07-15 11:21:57
၂ဝ၁၉ ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပညာရေးကွန်ရက်တို့က ဦးဆောင်ကျင်းပသော ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်ကျောင်းသားများအား တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် မည်သို့ရွေးချယ်လျှောက်ထားကြမလဲ၊ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ၊ ဘွဲ့ရများ၊ အလုပ်အကိုင် လျှောက်ထား လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပေးသော “ ပညာရေးနှင့် အနာဂတ်အခွင့်အလမ်း” ဟောပြောပွဲကို ဇူလိုင် ၁၄ ရက် နံနက် ၉ နာရီက မန္တလေး၊...
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အထောက်အကူပြု အခြေခံစက်ချုပ်နည်းပညာသင်တန်း (ဒုတိယအကြိမ်)ဖွင့်လှစ်
Web Admin	2019-07-02 12:45:35
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက် မိတ္ထီလာမြို့နယ်၌ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အထောက်အကူပြု အခြေခံစက်ချုပ်နည်းပညာသင်တန်းကျောင်း (ဒုတိယအကြိမ်)ကို ယနေ့နံနက် ၈ နာရီခွဲက အောင်မင်္ဂလာခန်းမ၌ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်၏ဇနီး အမျိုးသမီးကော်မတီနာယက ဒေါက်တာယုယုမေ၊ တိုင်းဒေသကြီး စိုက်ပျိုးရေး နှင့်မွေးမြူရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာစိုးသန်း၊...
Web Admin	2019-01-17 11:15:58
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၁၇ ရက် ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်မှ ပြည်သူလူထုနှင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ တွေ့ဆုံပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၁၆ မွန်းလွဲပိုင်းက ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်ရှိ ယူနန်ဘုံကျောင်း ၌ ကျင်းပရာ တိုင်းဒေသကြီး စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဒေါက်တာစိုးသန်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမျိုးနိုင်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ သန်းဝင်း နှင့်...
Web Admin	2019-01-12 14:30:53
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသမီးကော်မတီ၏ လမ်းညွှန်ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် ဆောင်ဒါန်းရက်ကန်းနှင့် အသက်မွေးပညာသိပ္ပံတို့ ပူးပေါင်း၍ စက်ချုပ်နည်းပညာအခြေခံနှင့်အဆင့်မြင့် သင်တန်းဆင်းပွဲကို ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက် နံနက် ၈ နာရီက အမရပူရမြို့နယ်ရှိ ဆောင်ဒါန်းရက်ကန်းနှင့်...
Web Admin	2018-12-10 11:14:01
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက် မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း၊ ဆေးရုံအုပ်ချုပ်မှုပညာအဖွဲ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများအသင်း(အထက်မြန်မာပြည်)တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သော ဆေးရုံစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းဖွင့်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက် နံနက် ၉ နာရီက မန္တလေး မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မြို့တော်ဆေးရုံ သင်တန်းခန်းမ တွင် ကျင်းပရာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်...